सरिरका यि अंगमा कोठी छ भने तपाईँकाे पैसा टिक्दैन « Dainiki
सरिरका यि अंगमा कोठी छ भने तपाईँकाे पैसा टिक्दैन
११ साउन, काठमाडाैँ । सबै मानिसहरूको शरीरमा भएका कोठीले केहिन केहि अर्थ दिने गर्दछ । हेर्नुहोस् यी भागहरु जहाँ कोठी भएमा पैसा टिक्दैन ।
बायाँ गालामा कोठी– जुन व्यक्तिको बायाँ गालामा कोठी हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत बढी नै हुने गर्दछ र रुपैयाँको कमी पनि हुँदैन तर आम्दानी भएता पनि पैसा भने बचाउन सक्दैन र आर्थिक समस्याबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ ।
चोर औँलामा कोठी– त्यस व्यक्ति जसको हातको चोर औँलामा कोठी हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो जीवनको लामो समयसम्म पनि पैसाको अभाव झेलिरहनु पर्ने हुन्छ ।
ओठमुनि कोठी– जस व्यक्तिको ओठमुनि कोठी हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले पैसा कमाउनका लागी जति नै प्रयास गरेता पनि आर्थिक समस्याबाट छुटकारा पाउन भने गाह्रो नै हुन्छ ।
बायाँ हत्केलामा कोठी– त्यस्ता व्यक्ति जसको बायाँ हत्केलामा कोठी हुन्छ त्यस किसिमका व्यक्तिहरू अत्यधिक खर्चालु हुने गर्छन् । खर्चालु भएका कारण त्यस्ता व्यक्तिले पैसाको भने बचत गर्न सक्दैन् बायाँ हत्केलामा कोठी हुनु खर्च गर्ने चिन्ह हुनु हो ।
बायाँ खुट्टामा कोठी – कुनै व्यक्तिको बायाँ खुट्टामा कोठी छ भने त्यस्ता व्यक्तिले आफूले कति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठम्याउन सक्दैनन् र खर्चको हिसाब राख्न नसकेका कारण प्राय अरू यस्ता व्यक्तिलाई ठग्ने गर्दछन् ।
बायाँ कोखामा कोठी– जस व्यक्तिको बायाँ कोखामा कोठी हुन्छन् त्यस्ता व्यक्ति बढी बिरामी भई उपचार गर्ने क्रममा बढी खर्च गरिरहनुपर्ने हुँदा यस्ता व्यक्तिसंग पैसाको अभाव हुने गर्दछ ।
बायाँ आइब्रोमाथि कोठी– यदि मानिसहरूको बायाँ आइब्रोको माथि कोठी भएमा त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा बढी आनन्द खोज्ने गर्दछन् । जसबाट लक्जरी लाइफका कारण त्यस्ता व्यक्तिलाई पैसा जोगाउन भने मुस्किल नै पर्ने गर्दछ ।
हत्केलामा कोठी– यदि कुनै मानिसको हत्केलामा कोठी भएमा त्यस्ता मानिसको जीवनमा पैसाको अभाव हुने विश्वास रहेको पाइन्छ र विवाहपछि पनि आर्थिक समस्यामा परिरहनु बाध्यता हुने गर्दछ ।
प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०७६, शनिबार १९:२३
बाँदरले आगो ताप्दै चिया पिएपछि…
१० माघ, महाेत्तरी । यति बेला तराईमा शितलहरले जनजिवन प्रभावित भएको छ । मानिसमात्र होइन
सक्नेले १० रुपैयाँ, नसक्नेलाई सित्तैमा खाना !
६ माघ, सुरुंगा । सडक बालबालिका, असाहय र विपन्न समुदायलाई लक्षित गर्दै झापाका तीन युवाले
श्रीमतिबारे प्रेरणादायी भनाइहरु
पत्नीका बारेमा धेरै जोक बनाइन्छन त्यस्तै धेरै प्रेरणादायक भनाइहरु पनि छन् । तल तपाईले प्रेरणादायक,
टुटेफुटेका यी ७ सामान घरमा राख्दै नराख्नुहोस् !
२० पुस, काठमाडौं । हामी हरेक कुरामा साइत खोज्छौं । सफल हुन चाहन्छौं । वास्तु
चर्को जनदबाबपछि गायिका आस्था राउत ४ हजार धरौटीमा रिहा
स्वरोजगारले समेत नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने
नोबल कोरोना भाइरसका कारण चीनमा १०६ को मृत्यु, चार हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
प्रेम दिवसमा ‘सयको गुन’
देउवा जोगाउन सानेपामा कांग्रेस कार्यकर्ताको भिडन्त, कुन्दन काफ्लेको मुखमा चोट (फोटोफिचर)
भीम रावल मन्त्री हुँदा सबै राम्रो हुने, मन्त्री हुन नपाएपछि सबै बिग्रने ?